Ukufumana umthombo we-intanethi wokufunda iincwadi ezininzi kunye namanqaku kuye kwaba nzima. Ngenxa yokuba uninzi lwamaqonga afikelelekayo kwi-intanethi yipremiyamu kwaye afuna umrhumo weprimiyamu. Yiyo loo nto sithathela ingqalelo ufikeleleko lwasimahla nolulula sizise iZ Library Apk.
Ngoku ukudibanisa ifayile ethile ye-app ngaphakathi kwe-smartphone kuya kuvumela abasebenzisi be-android. Ukufunda nokukhuphela amanqaku angenasiphelo kuquka iincwadi simahla. Ngaphandle kokufaka isicelo salo naluphi na ubhaliso okanye ukuthenga nayiphi na ilayisensi yepro.
Ekuphela kwento abayifunayo kukukhuphela inguqulelo yamva nje yefayile yeapp ukusuka apha. Nje ukuba ukhuphelo lugqityiwe, ngoku ndwendwela ivenkile ekwi-intanethi kwaye ufikelele kumxholo ongenasiphelo. Ke uyawuthanda umthombo kwaye ulungele ukusebenzisa eli thuba emva koko ufake iZ Library App.
Yintoni i-Z Library Apk
I-Z Library Apk ngumthombo wemfundo okwi-intanethi osekwe kugxilwe kubafundi. Injongo yokuvelisa lo mthombo yayikukubonelela ngeqonga elithembekileyo le-intanethi. Apho iincwadi kunye namanqaku zifumaneka khona ukuze zifundwe ngaphandle komrhumo.
Xa sithetha ngokufikeleleka ke oko kuthetha ukufumaneka komxholo othe ngqo. Apha kweli qonga lithile, amanqaku aquka iincwadi ezinokufikeleleka ziyakhutshelwa. Oku kuthetha ukuba abasebenzisi banokufunda ngokulula umxholo ngaphandle kwe-intanethi.
Masithi ukuba ufumene ubunzima bokufikelela kumxholo kwi-intanethi. Emva koko sincoma abasebenzisi be-android ukuba bakhuphe inqaku kuqala. Nje ukuba ukhuphelo lugqityiwe, ngoku vula ifayile ekhutshelweyo kwaye uyifunde ngokulula ixesha lasimahla.
Nkqu nokufunda umxholo okhutshelweyo ngaphandle kweintanethi akufuneki uqhagamshelo lwe-intanethi. Ukuza kuthi ga ngoku asikwazi ukubona iintengiso zomntu wesithathu. Yiyo loo nto ujonge umthombo oyinyaniso wokufunda iincwadi ezahlukeneyo kunye namanqaku emva koko kuya kufuneka uzame i-Z Library Android.
igama Z Library
ubungakanani 5.36 MB
Igama lepakheji com.zlibrary.book
udidi apps - Iibrari neeDemo
Okukhethekileyo kwesi sicelo sixhasa iifomati ezininzi. Oko kuthetha ukuba umxholo ofikelelekayo kwi-intanethi upapashwa kwaye ufakwe kwiifomathi ezahlukeneyo. Isizathu sokulayisha izinto kwiifomathi ezahlukeneyo kuqwalaselwa ukufikeleleka lula.
Kuba uninzi lwee-smartphones ezifikelelekayo ze-android zindala kwaye zamva nje. Ii-smartphones ezindala azize zixhase iifomati ezininzi. Kwanezo zixhobo zedijithali zisenokungakwazi ukuxhasa izixhobo eziphambili. Ezo zisetyenziswa ikakhulu ukuxhasa iifomathi ezahlukeneyo.
Kodwa kuqwalaselwa inkxalabo yomfundi kunye nokufikeleleka lula. Umphuhlisi ufaka iincwadi kunye namanqaku kwiifomathi ezahlukeneyo. Ke ngoko umsebenzisi akanakuze abe namava nayiphi na ingxaki ngelixa efikelela kwiqonga kunye nokukhuphela umxholo.
Iifomathi ezingundoqo ezixhasayo ziquka i-PDS, i-TXT, i-EPUB, i-MOBI kunye ne-DJVU. Udidi olufikelelekayo ngaphakathi kwi-app yiFiction, Comic, Academic, Foto, Business, Graphics, Politics, Science, Sports, Garden, Law, Agriculture and more.
Khumbula ukuba iimagazini ezahlukeneyo, iiNcwadi kunye neeLeta zeNdaba ziyafikeleleka ukuba zifundwe. Mhlawumbi ukhangela amanqaku amadala namva nje kuquka iincwadi. Sincoma ukuba ufake inguqulelo yamva nje ye-Z Library Khuphela ngaphakathi kwe-smartphone ye-Android.
Isimahla ukukhuphela ifayile ye-Apk.
Ukufakela i-app kunika ukufikelela ngokuthe ngqo kwizinto zokufunda ezingenasiphelo.
Oko kubandakanya zombini iiNcwadi kunye namaNqaku.
Kulula ukufaka i-Apk.
Ilungele ngokwemigaqo yokusebenziseka.
Uyikhuphela njani i-Z Library Apk
Phaya phaya iiwebhusayithi ezininzi zibanga ukuba zibonelela ngeefayile ezifanayo zeApk simahla. Kodwa eneneni, ezo webhusayithi zibonelela ngeefayile ezingeyonyani nezonakeleyo. Ke kufuneka benze ntoni abasebenzisi be-android kwimeko enjalo? Yiyo loo nto ubhidekile kwaye ungazi ukuba uthembele kubani.
Kufuneka undwendwele iwebhusayithi yethu kuba apha xa wonke umntu enikezela ngeefayile zobuxoki? Yiyo loo nto ubhidekile kwaye awazi ukuba ngubani omawuthembe kufuneka undwendwele iwebhusayithi yethu. Kuba apha kwiwebhusayithi yethu sinika kuphela iifayile ze-Apk eziyinyani kunye nezangaphambili.
Ifayile ye-Apk esiyinikezelayo apha sele ifakiwe kwii-smartphones ezahlukeneyo ze-android. Emva kokufaka ifayile ye-app asifumananga ngxaki okanye umba ngaphakathi. Nangona kunjalo, asikhe sibambe amalungelo okushicilela emveliso. Ke faka kwaye usebenzise i-Apk ngomngcipheko wakho.
Apha kwiwebhusayithi yethu, sipapashe uninzi lweefayile ezahlukeneyo ze-apk zemfundo. Ezi zidumileyo kwaye zinokusetyenziswa njengeyona ndlela ilungileyo kule fayile yeapp. Ukuphonononga ezo fayile zeapp nceda ulandele amakhonkco afana ImodemToon Mod kwaye GB Iindaba App Apk.
Yiyo loo nto ufuna umthombo we-intanethi wokufunda kunye nokukhuphela amaNqaku kunye neeNcwadi ezingenasiphelo. Ke ngokumalunga noku, sicebisa abo basebenzisi be-android bafake i-Z Library Apk. Oko kuyafikeleleka ukufikelela ukusuka apha ngokhetho olunye lokucofa.
iindidi Iibrari neeDemo, apps tags Z Library Android, Z Library Apk, Z App yeThala leencwadi, Z Khuphela iThala leencwadi Post yokukhangela
Ukhuphelo lwe-PicaShow ye-Apk ye-Android [Iimuvi + nothotho]